Ihe okike na Copyright | Martech Zone
Ihe okike na nwebisiinka
Nke a bụ, ikekwe, otu n'ime mkparịta ụka kachasị mma banyere otu iwu iwu nwebisiinka (IMO) abughi ihe na-ezighi ezi, mana o bukwa ihe okike omenaala anyi. Ihe mgbu nke iwu ndị a na-eme ka njọ site na mgbawa nke ohere nke providesntanetị na-enye anyị. Ọbụna na-atọ ụtọ bụ na a na-atụle ozi na akụkọ ihe mere eme ebe a Larry Lessig, onye ọka iwu.
Okpu okpu na- Lorraine maka ịchọta!
Tags: ọbịanjikarịchanjemnyocha njemWriting
Jul 12, 2008 na 1: 20 AM
Ee, ahụrụ m ozi ya n'anya. Dị ka ihe atụ, m na-agụ Omenala efu ọtụtụ afọ gara aga, ahụkwara m mgbu ya nke ukwuu. Otú ọ dị, na ihe niile zụtara na-akwụ ụgwọ maka suut anyị nwere na Congress enweghị m olileanya na ihe ga-agbanwe n'ọdịnihu a na-apụghị ịhụ anya. ;-(
Julaị 12, 2008, elekere 3:25 nke ehihie
Anyị nwere nsogbu n'ezie na obodo a ebe ikike azụmaahịa na-akarị ikike onye ọ bụla.